Xaaladda Itoobiya oo Sii Murgeysa Iyo Doorashada oo Dib Loo Dhigay. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Xaaladda Itoobiya oo Sii Murgeysa Iyo Doorashada oo Dib Loo Dhigay.
On May 16, 2021 1,966 0
Wararka ka imaanaya dalka Itoobiya ayaa waxay sheegayaan iney sii murgeyso xaaladda wadankaas kadib markii ay abaabul dagaal oo hor leh billaabeen dhinacyadii colaaddu ka dhaxaysay.
Tv-ga dowladda Mareykanka ee CNN oo booqday dalka Itoobiya ayaa soo gudbiyay muuqaallo sir ah oo uu kasoo duubay dhul badan oo ay wariyaashooda mareen.
Tv-ga oo warqad oggolaansho ah ka heystay xukuumadda Adis-ababa ayaa caqabad kala kulmay ciidanka Eratariyaanka ah ee heysta magaalada Aksum.
Askarta Eratariya ayaa u diiday wariyaasha Mareykanka iney dhex galaan magaalada taasina waxay kalliftay in ay wacaan madaxweynaha Eratariya Asiyaas Ofwarqi kaasoo ay oggolaanshihiisa ku heleen fursad ay kaga soo tallaabaan magaalada.
Arrintan ayaa muujineysa in ciidanka Eratariya ay wali ku xooggan yihiin gudaha Itoobiya, marar badan oo ay sheegeen iney baxayaan amaba baxeenna ay beenowday.
Wariyaasha ayaa muuqaalada u duubayay si qarsoodi ah oo ka baxsan anshaxa saxaafadda waxaana ay u muuqdeen saraakiil sirdoon ah oo u dhabba galaya waxa dhabta ah ee ka jira dalkaas.
Qowmiyada Tikreega oo dhib badan loo geystay ayaa dhulalka buuralayda ah ee ay gashay ka wada ol’ole soo rogaal celin ah waxaana la saadaalinayaa iney qarxaan dagaalo kale oo uu dhiib badan ku daato.
Muuqaalo laga soo qaaday goobo uu xasuuq ka dhacay ayaa waxay muujinayeen meelo u eg sida war oo kale oo uu dhiiggu degay waxaana goobahaasi dad Tikree ah ku xasuuqay ciidanka Eratariya.
Tv-ga CNN ayaa magaalada Maqalle ku booqday qoysas badan oo dad laga laayay, mid kamid ah qoysaskaas ayaa sheegay in kaligood laga dilay 7 qof waxaana ay wariyaasha geeyeen goobtii dadkooda lagu laayay oo uu dhiiggu ka muuqdo.
Dowladda Eratariya ayaa fursad weyn u aragtay xaaladda ka taagan Itoobiya mana dooneyso iney dib dambe Itoobiya isugu xirnaato maxaa yeelay waxay og tahay iney arrintaas dhibaato ku tahay.
Muuqaalada laga soo duubay dalkaas waxay soo bandhigayaan ciidanka Tikreega oo qaarkood dharka iska badalay iyo kuwa wata labiskoodii lagu yaqiin waxaana ay la wareegeen maamulka magaalooyin dhowr ah iyagoo shacabka ka qaada canshuur joogto ahi.
Dhanka kale dib u dhac ayaa ku yimid doorashada wadankaas maadaama ay wali xaaladdu cakiran tahay.
Madaxa guddiga doorashada Ethiopia ayaa sheegtay in aysan macquul ahayn in la qabto doorashada baarlamaanka ee qorshuhu ahaa in ay dhacdo 5-ta June, iyadoo aan la sheegin waqtiga cusub ee la qaban doono.
Ra’iisulwasaare Abiy Ahmed ayaa kolkii uu talada qabtay saddex sano ka hor waxa uu ballan qaaday in uu dalka ka saarayo hannaankii xukun ku dheganaanta ahaa, islamarkaana uu qaban doono doorashadii ugu quruxda badnayd.
Doorashooyinka ayaa markii hore qorsheysnaa bishii August ee sanadkii hore, waxaana dib loogu dhigay oo lagu marmarsiyooday cudurka safmarka ah ee coronavirus, iyadoo sidoo kalana ay soo kordheen dagaalada gobolka Tikreega.